कला साहित्य - कथा
यूकेमा बैबाहिक कार्यक्रम यूकेमा बैबाहिक कार्यक्रम यूकेमा बैबाहिक कार्यक्रम विश्व स्विजरल्यान्डका कार्यकारीको तलब घट्ने जेनेभा । स्विजरल्यान्डका जनताले व्यापारिक कार्यकारी प्रमुखको तलबमान नियन्त्रण गर्ने तथा उनीहरूलाई अवकाश लिन लगाउँदा दिइने ‘स्वर्ण प्यारासुट’ (गोल्डेन प्यारासुट) नाम गरिएको क्षतिपूर्तिका विषयमा आइतबार मतदान गरेका छन् । यसलाई ‘माइन्डर इनिसिएटिभ’ भनिएको छ र यसलाई व्यापारी तथा सिनेटर थोमस माइन्डरले अगाडि बढाउनुभएको हो । मध्यान्हसम्म सम्पन्न भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ६७.४ प्रतिशत मत प्राप्त भइसकेको बताइएको छ । अभिमत सर्वेक्षणमा यो प्रस्ताव मुलुकभर तथा जुरिकमा लागू हुने देखिएको छ । यहाँ मतकेन्द्र स्थानीय समय अनुसार साँझको ६ः३० बजेसम्म खुला रहेको थियो । स्विजरल्यान्डका जनतालाई मुलुकको प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार वर्षमा अनेकौँपटक मतदान गर्न लगाइन्छ । यसका लागि मतदाताले मतदानको दिनपूर्व पनि मतदान गर्न पाउँछन् । युरोपेली महासङ्घका मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कट टार्न भने स्विजल्यान्ड सफल भएको छ । यसो भएपनि व्यापार व्यवसायका कार्यकारी प्रमुखहरूले उच्च रूपमा वेतन तथा अन्य सुविधा लिएकोमा त्यहाँका जनता क्रुद्ध देखिएका छन् । यसरी अधिक मात्रामा वेतन लिएको आरोप औषधि उत्पादन कम्पनी नोभार्तिसका पूर्व कार्यकारी प्रमुख ड्यानियल भासेला पनि परेका छन् । उनले सन् २०११ मा एक करोड ५० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबर तलब बुझेका थिए । उनले यसै वर्ष फेब्रुअरी महिनादेखि नोकरीबाट अवकास लिन छ वर्षमा सात करोड २० लाख स्विस फ्र्याङक ‘स्वर्ण प्यारासुट’ पाउने व्यवस्था गर्न खोज्दा जनता झनै क्रुद्ध भएका थिए । भासेला सन् १९९६ देखि यस कम्पनीको प्रमुख पदमा रहेका थिए । उनले आफूलाई यस मतदानको प्रमुख मुद्दा नबनाइयोस् भनी ‘स्वर्ण प्यारासुट’ नलिने बताएका थिए । अर्का औषधि उत्पादन कम्पनी रोकका कार्यकारी प्रमुख सेभेरिन सेवानले एक करोड २५ लाख स्विस फ्र्याङक, खाद्य व्यापार नेस्लेका प्रमुख पाउल बल्कले एक करोड १२ लाख स्विस फ्र्याङक तथा चकलेट समूह लिन्डले एक करोड स्विस फ्र्याङक वार्षिक रूपमा तलब लिने गरेका छन् र उनीहरू पनि यस विधेयकको लक्ष्य बनेका छन् । सांसद माइन्डर आफैँ ट्रिबोल एसए नामक दाँत तथा कपालका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने संस्थाका प्रमुख हुन् र उनले कम्पनीका सञ्चालक बोर्ड कार्यकारी प्रमुखको तलब नियन्त्रण गर्न असफल भएको बताए । उनले दैनिक पत्रिका ली टेम्प्सलाई कम्पनीमा पाँच प्रतिशत डिभिडेन्ड उपलब्ध गराउने तथा जगेडा कोषमा राख्नुको सट्टा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई ठूलो आकारमा वेतन दिने गरिएको बताए । यो प्रस्ताव पारित भएमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख, अन्य प्रमुख तथा सञ्चालकले पाउने वेतन तथा सुविधालाई साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । यी कुरा विदेशी शेयर बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीमा मात्र लागु हुनेछ । यसमा सञ्चालक बोर्डको सदस्यको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको छ र उनीहरूलाई स्वर्ण प्यारासुट जस्ता सुविधा दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैगरी कसैले कम्पनी खरिद गरेमा उसलाई पहिलेको कामको बोनस दिन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो कानुन तोडेमा तीन वर्षसम्म काराबास तथा छ वर्षको तलब बराबर जरिवाना हुनसक्छ । स्विजरल्यान्डको सरकार तथा संसदको माथिल्लो सभाले यस विधेयकलाई विरोध गरेको थियो । उनीहरूले ठूला कम्पनीहरू मुलुकबाहिर जानसक्ने धारणा राखेका थिए । माइन्डरको प्रयासलाई असफल बनाउन संसदले अर्को प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ र त्यो खासै प्रभावकारी देखिदैन । माइन्डरको प्रयास सफल भएमा सरकारले यससम्बन्धी कानुन तयार गरी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र यसका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ । यो प्रस्ताव असफल भएमा संसदले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव कानुन हुनेछ । माइन्डरको प्रस्तावको विरोधमा स्विजरल्यान्डको कर्मचारी सङ्गठन इकोनोमिसुइसले ८० लाख स्विस फ्र्याङक खर्च गरेको थियो ।
वार्तानै सिरिया द्वन्द्वको समाधान दृष्टिकोन नेपालका रेग्मी सरकारलाई सुझाव
छुवाछूत र मानवीय मर्यादाको सवाल ०६२/६३ को त्यो आन्दोलन कसो मरिएन बाधा फुकाउँदा कसिएको संकट प्रर्यटन कीर्तिमानी दाजुभाइ
अमेरिकासँग ९४ रन नेपाल पराजित १४ वर्षको जीत कायमै टोटेनहमको जीत कला साहित्य - कथा टुहुराको मन
भौतारीनुको मज्जा बेग्लै हुन्छ वैवाहिक वर्षगाँठ विखण्डित मन मनोरंजन बेलायत भ्रमण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
केटा साथी छैन भन्दिनँ मिस नेपालमा १८ युवती मिस तामाङको उपाधि डोल्मालाई पुस्तक वार्ता पुस्तक पाउनेबित्तिकै किन्ने गर्छु
गीतकार विश्वकाजी राईको जन्म खोटाङ्गस्थित लफ्याङ्ग गाविसमा भएको हो । उनले कक्षा ३ सम्मको शिक्षा शारदा प्रा.वि. लफ्याङ्गमा पढे, त्यसपछि माउण्ट एभरेष्ट वोडिङ्ग स्कूल दिक्तेलबाट प्रवेशिका परीक्षा उतीर्ण गरेपछि बेलायती सेनामा भर्ती लाग्नुभएको हो । उनी सानैदेखि गीति लेखन र कविता लेखनमा कलम चलाउँदै आएका छन् । उनले नेपाली साहित्य र संगीतको श्रीवृद्धिको लागि एउटा गीति एल्वम उदाहरण र एउटा गीति संग्रह उजागर तपाई हामीसामू ल्याइसकेका छन् । उनले विभिन्न पुरस्कारहरु पनि पाउनुभएको छ । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको सदस्य हुनुहुन्छ भने खोटाङ्ग सेवा समाज बेलायत संस्थापक सदस्य, किराया बेलायत आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ काङमाङ नरेश राईले गीतकार विश्वकाजी राईसँग लिएको पुस्तक वार्ताको सारसंक्षेप ।
कुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले मैले केही पुस्तकहरु पढिरहेको छु । जसमा साहित्यकार तथा चित्रकार लैनसिंह वाङ्गदेलको संग्रहहरु, दयाकृष्ण राईको सम्झनाको आलीङ्गनमा बाँधिएर र कवि मुकेश राईको अनुभूतिका रंगहरु पढ्दैछु ।
पुस्तक पढ्नुको कारण ?
नयाँ कुरा बुझ्न र ज्ञानको भण्डारका लागि म अध्ययन गर्ने गर्छु । सबैभन्दा मन परेको पुस्तक ?
मलाई अति मन परेको पुस्तकमा कवि श्रवण मुकारुङ्गले लेख्नुभएको विसे नगर्चीको बयान अति नै मन पर्छ । मनपराउनु कारण ? उनको कविता सरल तर शक्तिशाली लाग्छ र मन पराउँछु ।
मनपर्ने नेपाली कवि तथा साहित्यकार ?
मलाई मनपर्ने कवि श्रवण मुकारुङ्ग नै हो । पढ्नैपर्ने नेपाली पुस्तकहरु ? विशेष गरेर हामी प्रवासीहरुले पढ्नैपर्ने साहित्यकार तथा चित्रकार लैंनसिंह वाङ्गदेलको मुलुक बाहिर र डा. गोविन्दराज भट्टराईको मुग्लान हो जस्तो लाग्छ । के समेटिएका छन् ती पुस्तकभित्र ? प्रवासीहरुको पीडाहरु छन् ती कृतिहरुमा । ती कृतिहरुले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो लाग्छ । कुन समयमा अध्यान गर्नुहुन्छ ? विशेष गरेर मलाई विहानको समयमा ज्यादै पढ्न मन पर्छ । तर पनि भ्रमणको बेलामा पढ्ने गर्छु । कस्तो ठाउँमा पढ्न मन लाग्छ ?
मलाई शान्त वातावरण भएको ठाउँमा पढ्न मन पर्छ । कहिलेदेखि साहित्यिक पुस्तकहरु पढ्न थाल्नुभएको हो ?
म सानै हुँदादेखि जब अक्षरहरुलाई राम्ररी चिन्न थालेँ, त्यो समयदेखि नै पढ्दै आएको छु । पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका पुस्तक पढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा कोदेखि पाउनुभयो ? आफ्नै गुरुवा, गुरुआमाबाट नै पाएको हुँ । पढ्न मनपरेको पुस्तक तर पाउनुभएको छैन ? मलाई मन परेका पुस्तकहरु धेरै भएतापनि यहाँ बेलायतमा पाउन सकिदैन यो हाम्रा लागि समस्या भएको छ जस्तो लाग्छ । कमाईको कति प्रतिशत रकम पुस्तक किन्नमा खर्च गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कुनै हिसाब गरेको छैन तर मन परेको किनेर पढ्ने गर्छु ।
पुस्तकविनाको जीवन र श्रीमतीविनाको जीवन कुन अर्थविहीन छ ? उस्तै नै हो तर पनि पुस्तकविनाको जीवन नै अर्थविहीन छ जस्तो लाग्छ । तपाईको भावी योजना के छ ?
मेरो भावी योजना गीतिसंग्रह नै फेरि पनि निकाल्ने र संस्मरण लेख्ने योजना छ ।
पुस्तक वार्ता गीतकार शशी थापा सुब्बा पुस्तक वार्ता अवकाश प्राप्त शिक्षक कृष्ण वहादुर राई पुस्तक वार्ता कवि जगत नवोदित Layeko maya by Hariman grg
More Videos Mr. Dut pun's Poem mathi mathi himal ko Life in UK Mr.Dut Pun with Sangeeta Marahatta Interview with Aaryan Sigdel and Priyanka Movie Song Layeko maya by Hariman grg Rajatpath April Rajatpath April 24 Rajatpath3April Upcomming Events
Mr. Dut pun's Poem
mathi mathi himal ko View All